China Nano self yokuhlanza aluminium ipuleti ifektri kanye nabaphakeli | I-Jixiang
Ukubuka konke komkhiqizo:
Ingaphezulu le-nano fluorocarbon aluminium ipuleti elinamathela linomsebenzi omuhle kakhulu wokuzihlanza. Ngokuvamile, iphaneli yamakhethini odonga lwe-aluminium-plastic izongcoliswa ngenxa yothuli nemvula ngemuva kokusebenzisa isikhathi esithile, ikakhulukazi i-silicone sealant engenasiqiniseko sekhwalithi esetshenzisiwe kwamanye amaphrojekthi, ngemuva kwesikhathi eside sokucwiliswa kwamanzi emvula, inani elikhulu amabala amnyama ageleza ephuma emajoyintini, angagcini ngokwandisa izikhathi zokuhlanza, kepha futhi athinta kakhulu ukubonakala kodonga. Ngenxa yobunzima bendawo ephansi yengubo uqobo, ibala kunzima ukunamathela kulo. Inani elincane lokungcola lingasuswa ngemuva kokugezwa ngamanzi emvula, angafeza umphumela wokuzihlanza ngokwakho. Kungonga izindleko eziningi zokuhlanza nezokugcina kubanikazi.
1. Izinzuzo zokonga amanzi: ukuhlanza udonga konga imithombo eminingi yamanzi;
2.Izinzuzo ezinkulu zokonga ugesi: i-TiO2 ye-OKer nano yokuzihlanza yokuvikela imvelo nokukhanya kwelanga ngemisebe ye-ultraviolet akugcini nje ngokunciphisa ukungcoliswa kokukhanya, kodwa futhi kuvimba u-15% wamandla elanga onke ukuthi angene ekamelweni, futhi anciphise ukusetshenziswa kwamandla, ukuyenza ipholile futhi ikhululeke.
3. Ukuhlanzwa komoya: amamitha ayisikwele ayi-10000 wokuzihlanza ngokwakho kufana nomphumela wokuhlanzwa komoya wezihlahla zikaphopula ezingama-200. INano-TiO2 ayikwazi ukubola ukungcola okungaphili nje kuphela, kepha futhi inamandla amakhulu okulwa namagciwane kanye namagciwane, angadlala indima enhle ekuhlanzweni komoya kwesifunda futhi athuthukise ikhwalithi yemvelo yomkhathi.
4. Nciphisa ukuguga nokufiphala kwe-substrate enemibala: I-OKer nano-TiO2 enamathela yokuzihlanza ivimba isenzo esiqondile semisebe ye-ultraviolet ku-substrate, inciphisa kahle ukubuna kombala onjengezindonga zamakhethini namabhodi okukhanya elangeni, futhi akulula ukuguga isikhathi eside, ukuze uzuze umphumela wokwelula ukukhanya nokuphila.
Izinkambu zohlelo lokusebenza:
Isetshenziswa kakhulu ezindongeni zamakhethini ezakhiwo ezisezingeni eliphakeme, amahhotela ezinkanyezi, izikhungo zombukiso, izikhumulo zezindiza, amagalaji kaphethiloli nezinye izindawo ezinesidingo esikhulu sokungcola komoya.
Langaphambilini Ipuleti lepulasitiki le-aluminium elingenamlilo
Olandelayo: Ipuleti lepulasitiki le-aluminium elimibalabala
Elwa namagciwane futhi antistatic aluminium plastic p ...